Xisbiga UPD oo xarun 3-aad ka furtay magaalada Muqdisho – UPD – Midowga Nabadda & Horumarka
March 2, 2019 0 Comments by Abbas	in News
Gelinkii dambe ee maanta Sabti 2-Mar. 2019 waxaa magaalada Muqdisho laga daahfuray xaruntii 3-aad ee uu xisbiga Midowga Nabadda & Horumarkaku yeelanayo gobolka Banaadir, ayadoona munaasabadii xarig jarka xaruntan cusub ay kasoo qeyb galeen inta badan golaha fulinta ee xisbiga, xildhibaano, xubnaha xisbiga, taageereyaasha iyo marti sharaf kale, waxaana xaruntan xariga ka jaray guddoomiyaha xisbiga mudane Hassan Sheikh Mohamud.
Xaruntan cusub oo ku taala degmada C/casiis ee gobolka Banaadir ayaa qaabili doonta xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga UPD ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir ee dhaca beriga iyo waqooyiga Muqdisho.
Guddoomiyaha xisbiga UPD mudane Xassan Sheekh Maxamuud oo xarig jarka kadib khudbad qiimo badan ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in xaruntan cusub ay aad muhiim ugu tahay xisbiga, isagoona xusay in xisbiga uu xarumo waaweyn ka furan doono dhamaan gobolada dalka, gobolka Banaadirna uu yahay meesha ugu muhiimsan maadaama ay Caasimadda dalka tahay in ka badan 3Milyan oo shacab Soomaaliyeed ahna ay ku nool yihiin.
Xisbiga UPD ayaa xaruntiisa dhexe waxay ku taalaa agagaarka Ariporta Aden Ade ee Muqdisho, ayadoona xarunta labaad ay ku taalo degmada Hodan, halkan xaruntan 3-aad oo ku taala degmada C/casiis ay ku biiri doonto xaruumahaas uu xisbiga ugu talo galay xubnihiisa iyo taageereyaashiisa si xarun weliba ay u qaabisho degmooyinka ku hareereysan.
NABAD IYO HORUMAR.